Gudoomiyaha Gobolka Sh/hoose oo sheegay in hawlgal ka socda To... | Universal Somali TV
Gudoomiyaha Gobolka Sh/hoose oo sheegay in hawlgal ka socda Toora Toorow
Ibraahim Aadan Cali (Najax), Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose oo ka hadlay hawlgalkii maanta lagula wareegay deegaanka Toora Toorow ayaa dhanka kale sheegay in hawlgal amni xaqiijin ah uu ka socdo deegaankaasi.
“Ciidanka Xoogga Dalka gaar ahaan qaybta Kumaandooska ayaa gaaray Deegaanka Toora Toorow oo ay hadda ka socdaan hawlgalo amniga lagu xoojinayo. Waxaan xaqiijinayaa in ciidanka ay si rasmi ah ula wareegeen Deegaanka Toora Toorow, shacabkuna ay aad ugu faraxsan yihiin guulaha ay gaareen ciidamada." Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Gudoomiyaha ayaa yiri “Deegaanka Toora Toorow oo ka tirsan Degmada Awqdheegle waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadka rayidka ah uga qaadi jireen lacagaha baadda ah, runtii waxaa kaloo ay tahay meelaha ay ugu yaallaan maxkamad beeneedka ah ee lagu baneysanayo lacagaha shacabka."
Gudoomiye Najax oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa xusay in uu sii socon doono gulufka Al Shabaab looga saaraayo deegaanada ay ka jooggan Gobolka Shabellaha Hoose.
Ciidanka Danab oo ka dhaqaaqay Garoonka Balli-doogle ayaa maanta si buuxdo ula wareegay gacan ku haynta deegaanka Toora Toorow, xilli aanay wax iska caabin ah kala kulmin maleeshiyada Al Shabaab.
Kan-xigaAmisom oo qalab ugu deeqday Booliska ...
Kan-horeRW Khayre oo qaabilay wafdi Ka Socda ...
RW Khayre oo si qurux badan loogu soo dhaweeyay Dhuusamareeb (SAWIRRO)
54,166,336 unique visits